IBC2017 မှာ PHABRIX | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC2017 မှာ PHABRIX
IBC2017 မှာ PHABRIX
PHABRIX ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ် SMPTE 2110 IP ကိုတိုးမြှင် HDR visualization စွမ်းရည်နှင့်အတူ၎င်း၏ Qx အကွာအဝေးများအတွက် signal ကိုမျိုးဆက်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတူရိယာများနှင့်အသံမျိုးဆက်များအတွက်ထောက်ခံမှုခိုင်ခံ့စေ၏, ပေါင်းစမ်းသပ်ပုံစံများရွေ့လျား။ အဆိုပါ Sx TAG ခရီးဆောင်အကွာအဝေးများအတွက်အသစ်အိုင်ပီ decapsulation / encapsulation တွေကိုသေချာ option ကိုလည်း 2017K-SDI စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့် RX2rackmount မီးစက် / Analyzer နှင့်အတူတစ်ဦးထက်ပိုသောစွယ်စုံ, Dual တူရိယာ display ကိုအတူ IBC2000 မှာပွဲထွက်ခဲ့ပြီးလိမ့်မည်။
IBC2017 ကို Preview
Qx Range နှင့်အတူ SMPTE 2110 အိုင်ပီမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ / သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Enhanced HDR Visual
အဆိုပါ Qx အကွာအဝေးအိုင်ပီ, 4K / UHD နှင့်မြင့်မားသော dynamic range ကို (HDR) / ကျယ်ပြန့်အရောင်အစအဆုံးအကုန် (WCG) မျိုးဆက်, analysis နှင့်ဗီဒီယို / အသံစောင့်ကြည့်ရေးပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာကဗီဒီယိုကို formats ရဲ့နောက်မျိုးဆက်မှဖက်ပြောင်းမှုအတွက်လိုအပ်သည့်အပေါငျးတို့သအဆင့်မြင့်, မျိုးစပ်အိုင်ပီ / SDI စမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်းတူရိယာမှအစာရှောင်ခြင်း access ကိုပေးသည်။
များအတွက်အသစ်က high-performance ကို IP ကို ​​toolset SMPTE ST-2110 နှင့် ST-2022-6 packet ကိုပိတ်ဆို့မှုကို, packet ကိုအရှုံးနှင့်မတည်မငြိမ်ဖြမ်၏လျင်မြန်သောရောဂါများအတွက် packet ကိုကြားကာလအချိန်ကိုက် (သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါဝင်သည်။ ရေရှည်ကွန်ယက်ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဘို့တှငျးကိုသစ်ခုတ်ခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်စစ်ဆင်ရေးသေချာဗီဒီယိုကွန်ရက်များစမ်းသပ်စိတ်ဖိစီးမှုများအတွက် packet ကိုပရိုဖိုင်းကိုမီးစက်လည်းရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Qx အကွာအဝေးရဲ့ပြည့်စုံ HDR နှင့် WCG toolset 4K / UHD ၏ visualization နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမြှင့်တင်ရန်အသစ်တူရိယာကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် HDWorkflows မြန်ဆန်ဖို့ -SDI အကြောင်းအရာ။ အဆိုပါ HDR / WCG ကိရိယာတွေကို signal ကိုမီးစက်, CIE ဇယား, တောက်ပအပူ-မြေပုံ vectorscope နှင့် waveform, ရှိသမျှထောက်ပံ့ Dolby PQ ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ UHD /HD-SDI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစွမ်းရည်ကိုလည်းအသံဖိုင်မျိုးဆက် / embedding ပေါင်းစမ်းသပ်ပုံစံများရွေ့လျား၏သစ်တစ်ခုအကွာအဝေးနှင့်အတူတိုးမြှင့်ပြီ။ အဆိုပါ Qx အကွာအဝေးရဲ့ 12G / 6G / 3G /HD-SDI physical layer သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Ultra-တုံ့ပြန်မှုသည်နှင့်မဆိုမီးမောင်းထိုးပြမှ real-time မျက်စိ (RTE ™) နည်းပညာန်ထမ်း SMPTE လိုက်နာမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။ ဤရွေ့ကားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Workflows ယခုပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော, စမ်းသပ်ခြင်းပိုမြန်ဖျော်ဖြေခံရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အလိုအလျောက်အတူခိုင်ခံ့စေ၏, နှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာနေကြသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/PHABRIX/PHABRIX-Qx-12G-Generator-and-Analyser.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: PHABRIX ရဲ့ Qx Range ဘဝမှကယျတငျ SMPTE 2110 အိုင်ပီမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ / သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Enhanced HDR Visual
IBC2017 မှာသူတို့ရဲ့ပွဲဦးထွက်ပြုလုပ်ခြင်း PHABRIX ထုတ်ကုန်များ
Sx TAG အိတ်ဆောင် Generator ကို / Analyzer များအတွက် IP ကို ​​Option ကို
PHABRIX ရဲ့ Ultra-ခရီးဆောင် Sx TAG signal ကိုမီးစက်, Analyzer နှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးတူရိယာယခုနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည် SMPTE 2022-6 အိုင်ပီ encapsulation တွေကိုသေချာ / decapsulation ။ အဆိုပါ Sx TAG လည်း 3G နှင့်အတူလည်ပတ် /HD/ SD က-SDI နှင့် analogue ဗီဒီယို, ကကွန်ရက်တစ်ခုကျော်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုအတူဝေးလံသောနေရာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Key ကိုတူရိယာတစ်ခု multiformat waveform နှင့် vectorscope ပါဝင်သည်အဖြစ်ဗီဒီယို 16 သုံးပြီးစောင့်ကြည့်:9မျက်နှာပြင်ပေါင်း 16-channel အသံစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု။ တစ်ခုကအလိုလိုသိ, color-coded interface ကိုစမ်းသပ်ခြင်း Workflows အမြန်နှုန်းနှင့်အဓိကသို့မဟုတျဘက်ထရီပါဝါနှင့်အတူစစ်ဆင်ရေးပြောင်းရွှေ့အပေါ်ဘက်စုံပေးပါသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/PHABRIX/PHABRIX-Sx-TAG-Portable-Generator-and-Analyser.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: အိုင်ပီ encapsulation တွေကိုသေချာ / Decapsulation အတူ PHABRIX ရဲ့ Sx TAG အိတ်ဆောင် Generator ကို / Analyzer
Built-in, Dual-စာရွက်စာတမ်းပြရန်နှင့်အတူ RX 2000 သိုလှောင်ဆင်-တပ်ဆင်ထား Generator ကို / Analyzer
OB ကုန်တင်ကားများနှင့်ထုတ်လွှင့်စောင့်ကြည့်မှုအဘို့စံပြ, အ PHABRIX RX 2000 ထိန်သိမ်း-တပ်ဆင်ထားမီးစက်, Analyzer နှင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုစနစ်က built-in တူရိယာ display တွေ, 2K-SDI ထောက်ခံမှုနှင့်ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူတိုးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးပေါင်းစည်းမော်နီတာယခု သာ. ကြီးမြတ်ဘက်စုံသုံးကမ်းလှမ်းရန်စမ်းသပ်တူရိယာ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းတင်ဆက်နိုင်ပါ။
RX 2000 ရုပ်သံလိုင်းနှုန်း 16 တူရိယာမှတက်နှင့်အတူပြင်ပ display ကို အသုံးပြု. လေးလိုင်းများမှတက်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆင့်မြင့် RX အကွာအဝေး 3G သုံးပြီးပိုမြန်အမှားရောဂါပေးပါသည် /HDပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအမှားအယွင်းများပေါင်း Remote access ပြုလုပ်ရန် / SD ကဗီဒီယိုရိုက်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/PHABRIX/PHABRIX-Rx-2000-Generator-and-Analyser.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Built-in စာရွက်စာတမ်း Display ကို 2000K-SDI ထောက်ပံ့ရေးနှင့် Flexible အတူ PHABRIX ရဲ့ RX2Generator ကို / Analyzer,
ယင်းအသံလွှင့်ဈေးကွက်ရဲ့ IP ကိုဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အအုံများချမှတ်သည့်အတိုင်း "လျင်မြန်စွာ packet ကိုပိတ်ဆို့မှုကို, packet ကိုအရှုံးနှင့်မတည်မငြိမ်ဖြမ်နဲ့တူပြဿနာများ diagnosis နိုငျသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်တိုင်းတာရေးကိရိယာများသစ်အမျိုးအစားများ, များအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။ အရေးကြီးတာက, ဗီဒီယိုကွန်ရက်တားဆီးကာကွယ်ရေးစိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်ခွင့်ပြုတူရိယာတစ်ခုအစစ်အမှန်ဝယ်လိုအားလည်းရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အသစ်ကမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေ SMPTE တိုက်ရိုက်ကဤအခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းကြောင်း IBC2110 မှာ 2017 အိုင်ပီကိရိယာများ။ "
- နီးလ်ရှပ်, PHABRIX မှာစျေးကွက်၏ဦးခေါင်း
PHABRIX လျင်မြန်စွာအမှားရောဂါ, လိုက်နာမှုစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခရီးဆောင်နှင့် rackmount စနစ်များအပြည့်အဝအကွာအဝေးနှင့်အတူထုတ်လွှင့်စမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်းအတွက်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာအားသာချက်အိုင်ပီကိုဗီဒီယိုစီးမျိုးဆက်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အဆင့်မြင့် HDR / WCG visualization နှင့်, Ultra-တုံ့ပြန်မှု physical layer သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါဝင်သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အစုစုထိပ်-Of-The စပ်အိုင်ပီ, 12K / UHD နှင့် HDR / WCG signal ကိုမျိုးဆက်, analysis နှင့်ဗီဒီယို / အသံစောင့်ကြည့်ရေးအတှကျအကွာအဝေး Qx 4G ပါဝင်သည်။ အဆိုပါအဆင့်မြင့်, rackmount RX အကွာအဝေး 3G အတွက်အစာရှောင်ခြင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်ရွေ့ရောဂါပေးပါသည် /HDဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီ access ကို အသုံးပြု. -SDI ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ Ultra-ခရီးဆောင်တူရိယာတောင်းဆို applications များအဘို့, ကုမ္ပဏီကိုလည်းဆုရ Sx အကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]%20products%20at%20%23IBCShow%202017%20on%20stand%2010.B12%20-%20https://goo.gl/nfcU5x%[အီးမေးလျ protected]
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ decapsulation encapsulation တွေကိုသေချာ IBC2017 isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော PHABRIX Qx အကွာအဝေး RX 2000 SMPTE 2110 SoftAtHome, MStar, CES2017 Sx TAG က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-07-26
ယခင်: IBC2017 မှာ Osprey ဗီဒီယို
နောက်တစ်ခု: IBC2017 မှာ Bluebell Opticom